Granit Xhaka oo xaqiijiyey haddii uu ka tagayo Kooxda Arsenal oo uu ku biirayo Roma – Gool FM
Granit Xhaka oo xaqiijiyey haddii uu ka tagayo Kooxda Arsenal oo uu ku biirayo Roma
Haaruun August 23, 2021
(London) 23 Agoosto 2021. Kabtanka Arsenal ee Granit Xhaka ayaa xaqiijiyey inuu heshiis cusub u saxiixay Gunners, taasoo la micno ah inuusan ku biiri doonin naadiga reer Talyaani ee Roma.
Xiddiga xulka qaranka Switzerland ayaa bartilmaameedka koowaad u ahaa Macallin José Mourinho xagaagan, laakiin inkastoo xiddigan khadka dhexe uu heshiiska shaqsiga ah la gaaray Giallorossi, haddana Roma iyo Arsenal ayaan ka heshiis qiimaha laacibkan lagula kala wareegayo.
Sidaasi darted, Kooxda Premier League ayaa wadahadallo u gashay sidii ay u kordhiso qandaraaska kabtankooda, waxayna ku guuleysteen inay si dhaqso ah u gaaraan heshiis.
Xhaka ayaa u xaqiijiyay website -ka rasmiga ah ee Kooxda Arsenal inuu durba saxiixay heshiis cusub oo uu ku sii joogi doono garoonka Emirates.
“Aad ayaan u faraxsanahay, weli halkaan ayaan joogaa, waxaan saxiixay qandaraas cusub dabcan, waxaan doonayaa inaan dib ugu laabto, ugu horrayn shaqaalaheenna, kaddibna Taageerayaasheenna, wayna ogyihiin inaan wax walba siin doono – ciyaar kasta iyo tababar kasta” ayuu yiri laacibkan khadka dhexe.
Manchester United oo mid ka mid ah xiddigaheeda amaah ku siisay Koox ka dheesha horyaalka Premier League